News - Geneham Phytopro ၏ကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှောင်းပိုင်းတွင်မွေးဖွားသောမျိုးစေ့များနို့တိုက်သတ္တဝါနှင့်ဂလင်းများအပေါ်သက်ရောက်မှု
၁ ။ PX511 သည် PX511 ဖြည့်စွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်း (၈၅ ရက်ကိုယ်ဝန် - မွေးဖွားခြင်း) တွင်ရှိသောမျိုးစေ့များထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုလေ့လာရန်ရက် ၃၀ ဆက်တိုက်အစားအသောက်ကုသမှုကိုမွေးဖွားခြင်းနှင့်နီးစပ်သောမျိုးစေ့ ၃၀ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နောက်ကျသောမျိုးစေ့များ - မမွေးမီတစ်လ (ကိုယ်ဝန် ၈၅ ရက် - မွေးခြင်း) ။
Breed: Landrace & ကြီးမားသောအဖြူရောင် binary hybridized မျိုးစေ့များနှင့်အမှိုက်များအတူတူပင်
3. အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းစမ်းသပ် protocols များ:
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နောက်ကျသောမျိုးစေ့များကိုအုပ်စုသုံးစု ခွဲ၍ အုပ်စုတစ်စုလျှင် ၁၀ ယောက်စီခွဲသည်။
စမ်းသပ်ကုသမှုများမှာ Control၊ PhytoPro 500g, Basal diet + Phytopro 500g / ton feed; Phytopro 1000g, Basal အစားအစာ + PhytoPro 1000g / ton နို့တိုက်ကျွေးမှု။ စမ်းသပ်မှုကိုကိုယ်ဝန် ၈၅ ရက်မှမွေးဖွားခြင်းအထိပြုလုပ်ခဲ့သည်
၄။ စမ်းသပ်ချိန်နှင့်နေရာ - မတ်လ ၃ ရက်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂ ရက်နေ့အထိ Changsha XXX ဝက်မွေးမြူရေးခြံတွင်ဖြစ်သည်
၅ ။ဝက်ခြံ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အရသိရသည်။ အားလုံးသည် ad-libitum ရေကိုသောက်သုံးကြသော်လည်းအကန့်အသတ်ဖြင့်သာစားသုံးကြသည်
၆ ။ ၁။ ပျမ်းမျှအလေးချိန်မွေးထားသောဝက်ဝံကောင် ၂။ အမှိုက်သရိုက်များ၌မွေးဖွားသောကျန်းမာရေး ၀ က်ခွံများ
PhytoPro 500 ဂရမ်
ကန ဦး စမ်းသပ်မှုနံပါတ်
အထက်ပါဇယားသည်စမ်းသပ်မှုအုပ်စုမှ ၂၃ ရက်အရွယ်ရှိဝက်များနှင့် PhytoPro 1000g / ton နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်။
7. PhytoPro 1000g နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်စမ်းသပ်မှုအုပ်စုအကြားလေ့လာရေး
ထင်သည်အတိုင်း, ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့် PhytoPro ကို 1000g / တစ်တန်နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုအုပ်စုအကြားဝက်များ၏ပျမ်းမျှအလေးချိန်ခြားနားချက် 80 ဂရမ်ခန့်ဖြစ်။ အမှိုက်သရိုက်များအတွက်မွေးဖွားကျန်းမာ piglets သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ PhytoPro 1000g / ton အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဝက်များ၏တူညီမှုတိုးတက်လာသည်။ ၂၃ ရက်အရွယ်ရှိ piglets များ၏အလေးချိန်မှာတိုးများလာပြီး piglets အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုမှာအနည်းငယ်သေးငယ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ placental အတားအဆီးမှတဆင့်မိခင်အစာအာဟာရသည်သားအိမ်အတွင်းရှိအားနည်းနေသောဝက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလှုံ့ဆော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Geneham PhytoPro သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရကိုယ် ၀ န်ဆောင်နှောင်းပိုင်းတွင်မျိုးစေ့ကြဲသူများ၏နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ အောက်ပါပြproblemsနာများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်
၁။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၊ နေဆဲမွေးဖွားခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသောကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအခက်အခဲပြRedနာကိုလျှော့ချပါ
၂။ နို့တိုက်သည့်ပမာဏတိုး။ နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါကြီးထွားမှုကိုအားကောင်းစေပါ